သဖန်းပင်ကိုယေရှုဘာကြောင့်ကျိန်ဆဲခဲ့တာလဲ။ Online Online️အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေပါ
သဖန်းပင်ကိုယေရှုဘာကြောင့်ကျိန်ဆဲခဲ့တာလဲ။ လူများစွာသည်သခင်ယေရှုကဲ့သို့လုပ်နိုင်တော်မူသောမေတ္တာများစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်ကိုကြားရသောအခါအံ့သြကြသည် သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုကျိန်ဆဲလျှင်၊။ သို့သျောလညျး သခင်ဘုရား၏အမှုတော်တိုင်း၌နောက်ခံရှင်းပြချက်ရှိသည် သူ့ရဲ့သတင်းစကားကိုနားလည်ဖို့ငါတို့ဘာကိုရှာရမယ်။
En ယေရှု၏စကားတိုင်းနှင့်လုပ်ရပ်တိုင်းသည်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိသည်သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုကျိန်ဆဲသောအခါ၎င်းသည်ခြားနားသည်မဟုတ်။ ထိုရိုးရှင်းသောအမူအရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောအတွေးကိုသိလိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူရမည့်ထူးခြားသောအရာတစ်ခုကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာမင်းသိချင်သလား။
1.1 ၁။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းသောသူတို့သည်အံ့သြဖွယ်ရာများကိုမြင်လိမ့်မည်
1.2 ၂။ အသီးမသီးသောသူတို့သည်အပြစ်ဒဏ်ခံရလိမ့်မည်
သခင်ယေရှုသည်သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုဒေါသနှင့်မကျိန်ဆဲဘဲ၊ ​​ထိုသို့ပြုခဲ့သည် ငါတို့ကိုဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးပါမရ။ ဒါပေမယ့်သတင်းစကားကဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့၊ သတင်းအပြည့်အစုံကိုရှင်းပြချင်တယ်။
အောင်ပွဲခံဂျေရုဆလင်သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်သူသည်လမ်းလျှောက်။ ဗိုက်ဆာသည်။ သူသည်အရွက်များပါသောသင်္ဘောသဖန်းပင်တစ်ခုအနီးသို့ရောက်ပြီးသူ့သားသမီးများကိုရှာသည်။ သို့သော်သူသည်ဘာမျှမတွေ့ခဲ့ဘဲကျိန်စာတိုက်ခဲ့သဖြင့်၎င်းသည်အသီးမသီးတော့ပေ။ နောက်တစ်နေ့ သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်လုံးဝခြောက်သွေ့သည် သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်အလွန်လျင်မြန်စွာခန်းခြောက်သောကြောင့်အမြစ်မှတပည့်တော်တို့သည်အံ့ကြ၏။
အရွက်ရှိသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုအဝေးကမြင်လျှင်ထိုအပင်၌တစ်စုံတစ်ခုတွေ့နိုင်သည်ကိုကြည့်၏။ သူရောက်သောအခါအသီးသည်အရွက်ကိုသာတွေ့သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သဖန်းသီးရာသီမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်ယေရှုကသင်္ဘောသဖန်းပင်အား“ သင်တို့၏အသီးကိုဘယ်သောအခါမှမစားပါနှင့်။ တပည့်တော်သည်ထိုစကားကိုကြား၏။
မာကု ၁၀: ၇-၈
ယေရှုကငါတို့ကိုအဲဒါကိုပြခဲ့တယ် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြောင်းနှင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သောမည်သူမဆိုမည်သည့်အံ့ဖွယ်အမှုကိုမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်မရ။ ၎င်းသည်သူ၌ရှိသောဘုရားသခင့်တန်ခိုးတော်ကိုသရုပ်ဖော်ပြသခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ၊ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအရာအားလုံးကိုအောင်မြင်ရန်လိုက်နာရန်နည်းလမ်းကိုပြသသည်။
ဤရိုးရှင်းသောကျမ်းပိုဒ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုနားလည်စေသည် သူ၏တန်ခိုးကိုသူကိုယ်တိုင်မရသော်လည်းသူ၏ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းလျှောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအရာထက်ဘုရားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ချက်ရှိရမည်။
၎င်းသည်သင်္ဘောသဖန်းရာသီမဟုတ်သော်လည်းသဖန်းသီးများကိုတွေ့ရန်ယေရှုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။ အချို့သင်္ဘောသဖန်းပင်များသည်ရာသီမလာမီအသီးစောသည်။ အရွက်များပါသောသဖန်းပင်တစ်ပင်သည်အစိမ်းရောင်သင်္ဘောသဖန်းပင်ရှိပြီးဖြစ်သည်မရ။ ယေရှုကျိန်ဆဲသောသဖန်းပင်၌အရွက်ရှိသော်လည်းအသီးမသီး။ သူမ၏အသွင်အပြင်သည်လှည့်စားခဲ့သည်၊ သူမရင့်ကျက်ပုံရသည်၊ သို့သော်သူမမဟုတ်ပါ။
လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့စပျစ်ဥယျာဉ်မှာသင်္ဘောသဖန်းပင်တစ်ပင်စိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင်္ဘောသဖန်းပင်ကို ၃ နှစ်စိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသီးမသီးခဲ့ဘူး။ ၃ နှစ်ကြာလျှင်သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်အသီးမသီးသေးဟုထင်သည် ၎င်းသည်အသုံးမ ၀ င်သောမြေကိုမဖြစ်စေဘဲ၎င်းကိုဖြတ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
တဖန်ဥပမာကိုမိန့်တော်မူသည်ကား၊ လူတယောက်သည်ဥယျာဉ်၌စိုက်သောသင်္ဘောသဖန်းပင်တပင်ရှိ၏။ ထိုအပင်သို့ လာ၍ အသီးကိုရှာသော်လည်းမတွေ့။
သူသည်စပျစ်ခြံလုပ်သားအားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဤသင်္ဘောသဖန်းပင်၌အသီးကိုငါရှာသည်မှာသုံးနှစ်ရှိပြီ၊ ငါမတွေ့သော်လည်း၊ ဖြတ်တောက်; မြေကြီးကိုအသုံးမ ၀ င်အောင်ဘာကြောင့်လုပ်တာလဲ။
လုကာ ၂၄: ၂၅-၂၇
ဒီပုံဥပမာနဲ့ယေရှုကငါတို့ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ သင်္ဘောသဖန်းပင်ကဲ့သို့သင်တို့သည်အသီးကိုသီးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်ကအချိန်တစ်ခုပေးပါ၊ ဒါပေမယ့်မကြာခင်ဒါမှမဟုတ်မကြာခင်မှာသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်နောင်တမရတဲ့သူတွေကိုအပြစ်ပေးလိမ့်မယ်။
သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုကျိန်ဆဲသောနေ့မတိုင်မီတစ်ရက်တွင်ယေရှုသည်လူအုပ်၏အားပေးမှုဖြင့်ဂျေရုဆလင်သို့ ၀ င်လာခဲ့သည်။ လူတွေကယေရှုကိုလက်ခံဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ပတ်အကြာမှာသူတို့ကယေရှုကိုသေစေချင်ကြတယ်။ သူတို့သည်ကျိန်ခြင်းခံရသောသင်္ဘောသဖန်းပင်နှင့်တူပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်ပုံရသော်လည်းအသီးမသီးခဲ့ပေ။ သူ၏အသွင်အပြင်သည်လှည့်စားခဲ့သည်။
ရှေ့မှသွားသောသူနှင့်လိုက်သောသူတို့သည်အော်ဟစ်။ ၊ ဟိုဆန်၊ ထာဝရဘုရား၏နာမတော်၌ကြွလာသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်း။
! ငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏လာမယ့်နိုင်ငံတော်သည်မင်္ဂလာရှိ၏။ အမြင့်ဆုံး၌ Hosanna
ယေရှုအားဖြင့်ကယ်တင်သောသူသည်အသီးကိုသီးလိမ့်မည်။ မင်းအပြစ်ကိုမချစ်ဘဲမင်းဘဝကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ။ ၎င်း၏သစ်သီးများသည်အရွက်များကြားတွင်ဝှက်ထားသော်လည်းအစိမ်းရောင်နှင့်သေးငယ်နေနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့တွင်ရှိသည်။ လူအချို့သည်ယေရှုကိုချစ်ပုံရသည်၊ သို့သော်နောင်တမရကြသောကြောင့်အပြစ်ကိုလက်မလျှော့ကြချေ။
တစ်နေ့တွင်လူတစ် ဦး စီသည်ဘုရားသခင်ကတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်၊ ယေရှုပြောင်းလဲခဲ့သောဘဝအသီးအပွင့်ကိုမပြသောသူသည်အပြစ်ဒဏ်ခံရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ယုံကြည်သူတစ် ဦး စီသည်မိမိ၏ဘ ၀ ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောအရာများကိုကြည့်ရန်လိုသည်။ ယေရှု၏အကူအညီဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့များစွာသောအသီးကိုသီးနိုင်သည်။
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! ဒီဆောင်းပါးတိုကမင်းကိုနားလည်ဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် သဖန်းပင်ကိုယေရှုဘာကြောင့်ကျိန်ဆဲခဲ့တာလဲမရ။ သမ္မာကျမ်းစာမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်သောနောက်ထပ်ဆောင်းပါးများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှုကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်း? သငျသညျပျော်ရွှင်စရာနည်းလမ်းဖြင့်ပညာဆက်လက်သင်ယူလိုလျှင်သင်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် Discover.online ။